Orinasa fanaka Ho amidy sy manofa in London
GB mg Hiditra
View Orinasa fanaka Published 3 months ago
I London no renivohitra sy tanàna lehibe indrindra any Angletera ary Fanjakana anglisy. Nijanona teo amoron'ny renirano Thames tany atsimo atsinanan'i Angletera, teo amin'ny lohan'ny 80% kilometatra nitaingina ny Ranomasina Avaratra, London dia tanàna lehibe iray natao ho an'ny roa arivo taona. Londinium dia noforonin'ny Romana. Ny tanànan'i Londres, tanàn-dehibe taloha any London - faritra iray mirefy 1,12 kilaometatra toradroa (2.9 km2) ary fantatra amin'ny anarana hoe Square Mile - mitazona fetra manara-maso akaiky ny fetran'ny taona. Ny City of Westminster ihany koa ny biraon'ny Inner London mihazona ny sata ao an-tanàna. Greater London dia fehezin'ny Ben'ny tanànan'i Londres sy ny fivorian'ny Londres.London dia heverina ho iray amin'ireo tanàna manerantany lehibe indrindra ary nantsoina hoe mahery indrindra, tena irariana, manintona, be mpitsidika indrindra, lafo vidy, manova, Tanàna maharitra, be mpampiasa sy be mpampiasa ary be mpitia indrindra. Ny London dia misy fiantraikany lehibe amin'ny zava-kanto, varotra, fanabeazana, fialamboly, lamaody, famatsiam-bola, fahasalamana, haino aman-jery, serivisy matihanina, fikarohana ary fampandrosoana, fizahan-tany sy fitaterana. Mitana ny laharana faha-26 isaky ny tanàna lehibe 300 ho an'i Londona i London. Iray amin'ireo foibe ara-bola lehibe indrindra izy io ary manana ny GDP fahefatra na lehibe fahenina lehibe indrindra. Io no tanàna be mpitsidika indrindra arakaraka ny fahatongavan'ireo fahatongavan'ireo sehatra iraisam-pirenena ary manana ny rafi-piaramanidina tanàna manerantany indrindra araka ny refin'ny mpandeha mpandeha. Io no toerana voalohany itadiavana fampiasam-bola, mampiantrano ireo mpivarotra eran-tany sy vondron'olona avo lenta kokoa noho ny tanàna hafa. Ny oniversite any London dia mametraka ny fifantohana lehibe indrindra amin'ny oniversite fampianarana ambony any Eropa, ary i London dia fonenan'ny andrim-panjakana ambony toa an'i Imperial College London amin'ny siansa voajanahary sy ampiharina, ny London School of Economics amin'ny siansa sosialy, ary ny University University London sy ny King's College London. Tamin'ny 2012, London no tanàna voalohany nandraisana Lalao Olaimpika maoderina fahavaratra.London manana olona sy kolontsaina isan-karazany, ary fiteny 300 mahery no ampiasaina ao amin'ny faritra. Ny tombatomban'ny monisipaly tamin'ny tapaky ny taona 2018 (nifanaraka tamin'i Greater London) dia 8.908,081, no fahatelo no be mponina indrindra amin'ny tanàna rehetra any Eoropa ary mitentina 13,4% amin'ny mponina any UK. Ny tanàn-dehibe ao London dia ny fahatelo amin'ireo be mponina indrindra any Eropa, taorian'ny Moskoa sy Paris, izay miisa 97.726426 tamin'ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2011. Ny fehikibo commuter London dia ny be mponina indrindra any Eropa izay misy mponina 14 4840 1616 tamin'ny 2016. Talohan'ny Brexit, London dia tanàna lehibe indrindra tao amin'ny Vondrona Eoropeana. Ahitana tranokala lova eran-tany efatra i London: ny Tilikambon'i London; Kew Gardens; ny tranonkala misy ny Lapan'ny Westminster, Westminster Abbey, ary ny Fiangonan'i St Margaret; ary ny fanoratana manan-tantara any Greenwich izay ny Royal Observatory, Greenwich dia mamaritra ny Prime Meridian (0 ° longitude) ary Greenwich Mean Time. Ireo mari-pamantarana hafa dia ny lapan'i Buckingham, London Eye, Piccadilly Circus, Katedraly St Paul, Bridge Bridge, Trafalgar Square ary The Shard. London dia manana tranom-bakoka, tranombakoka, tranomboky ary hetsika ara-panatanjahantena betsaka. Anisan'izany ny British Museum, National Gallery, Natural History Museum, Tate Modern, British Library ary West End ny trano fijerena. Ny London Underground no tambajotra lalamby farany indrindra eto an-tany.